” မျိုးဇာတိဂုဏ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” မျိုးဇာတိဂုဏ် “
” မျိုးဇာတိဂုဏ် “
Posted by ခင်ခ on Nov 11, 2014 in Creative Writing, Poetry | 10 comments
ဘယ်သူခွဲခွဲ ဒို့မကွဲ အမြဲစည်းလုံးမယ်။
နေပြည်တော် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀
ယခင် စက်မှု ၁ ၀န်ကြီးဟောင်း ယခု တောင်သာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းအား အမေရိကန် ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပိတ်ဆို့ ကန့်သတ်ခံရသူများ စာရင်းတွင် ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ်က ထည့်သွင်းလိုက်သည့် အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အချက် ၄ချက်ပါ ကြေငြာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဦးအောင်သောင်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ ဥက္ကဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်၊။ လက်ရှိကာလတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော် အသီးသီးတို့သည် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ ဥပဒေပြုခြင်းနှင့် အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိန်းကြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆောင်ရွက်နေသည့်နည်းတူ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေး အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုလည်း အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော အဖွဲ့စည်းများဖြစ်ပါသည်၊ လွှတ်တော်အသီးသီးနှင့် လွှတ်တော်ကော်မတီများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းကောင်း လွှတ်တော်အသီးသီးက အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေး အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းကောင်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လျှက်ရှိသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ ဆက်ဆံရေးကိုလည်းကောင်း မလိုလားအပ်သော ထိခိုက်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် အပိုဒ်၁ပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကန့်ကွက်ပါကြောင်းနှင့် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်မျိုးပေါ်ပေါက်စေရန် ဖန်တီး လုပ်ကိုင်သူများနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို ရှုံချပါကြောင်း စသည့် အချက် ၄ချက်ကို ယနေ့နိုဝင်ဘာလ ၁၀ရက်တွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် ၁၁ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ကြေငြာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ဦးအောင်သောင်းအား အမေရိကန် ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပိတ်ဆို့ ခံရသူများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းလိုက်သည့် အတွက် နိုဝင်ဘာ၁၀ ရက်က ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်လည်း မင်္ဂလာဒုံမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဝင်းက လည်း အရေးကြီးအဆိုအနေဖြင့် တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၄င်းအဆိုကို တနိုင်းမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဆွေ မှ ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကလည်း ၄င်းအဆိုကို ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သောင်းအား အမေရိကန်သမ္မတ၏ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ Eo13441 အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ပပိုင်ဆိုင် မှုများ ထိန်းချုပ်ရည်ညွှန်း ပိတ်ဆို့ ကန့်သတ် ခံသူများစာရင်းတွင် ၂၀၁၄ခုနှစ် အောက်တိုလ ၃၁ ရက်မှစ၍ ထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊။
Carrot and stick ပေါ်လစီနဲ့လုပ်မယ်လို့ စကတည်းက.. ကလင်တန်မမ ကပြောထားခဲ့တာပဲ..။ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်လေ…။
သူတို့ ဆုအနေနဲ့ပေးတာလည်း. .. ဒေါ်လှပဲ.. မီယီယန်ရာချီနေပြီ၊ ဒဏ်တွေလာဦးမှာပေါ့…။
ယူအက်စ်က..” ဟ” ပေးထားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ.. ငွေကြေးစုဆောင်းမိထားသူတွေ.. လှိမ့်ဝင်ထုတ်လိုက်ကြတာ… ငွေစာရင်းတွေအကုန်.. စီအိုင်အေလက်ထက်.. “မိ”ထားပုံပေါ်ပါတယ်..။
ထပ်လှုပ်ရဲတဲ့သူများ.. ရှိသေးသလားလို့.. ။
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်.. စိတ်စေတနာရင်းနဲ့လုပ်ကြရင်တော့.. ဘယ်သူမှ.. ဘာမှဖြစ်မယ်မထင်…။
ဆေးတောင်.. အခမဲ့ကုပေးဦးမယ်.. ထင်..။ :K:
ဟိုအရင် ဦးအောင်ဆန်း ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကို သမိုင်းမှာအခုလို သုံးနှုန်းထားတာဖတ်ဖူးတယ် ” တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် ” တဲ့လေ။ တကယ်လဲ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့နဲ့ ပြည်နယ်ပြည်မမချန် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးကောင်းစားရေး ဦးတည်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
အခုခေတ်လွှတ်တော်ကတော့ တစ်ပါတီကောင်းစား တည်တန့်ခိုင်မြဲရေးကိုဘဲ မမှိတ်မသုန်လုပ်လေရဲ့လေ သဂျီးရေ။
လူ့အခွင့်အရေး တွေ လူသားအားလုံး သာတူညီမျှ တွေ
စကားလုံး အကြီးကြီး တွေ မပြောဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး လေး အရင် လုပ်ပေးကြရင် ကောင်းမှာ….
ညာချတဲ့ လွှတ်တော်ဘဝက လွတ်ရင် ဖြစ်ပြီမှတ်ရတော့မယ်လေ။
စည်းရုံးမယ့်စည်းရုံး အသိတွေ ပညာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေရှိတဲ့ အိုင်ဒီယာသစ်အပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ. . .
ဒါဆို ဦးမိုက်က ဆိုရှယ်လစ်ပေါ့…
( အမည်မည်းစာရင်းသွင်းခြင်း၊ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကြောင့် အောက်ခြေ နင်းပြားတိုင်းရင်း သားပြည်သူများအနေဖြင့် ထူးထူး ခြားခြားအကျိုးမရနိုင်သော်လည်း အဆိုပါ အမည်မည်းစာရင်းသွင်း ခြင်း၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ သည် အောက်ခြေနင်းပြား ငမွဲသားတို့အတွက် အောင်ပွဲခေါ်သံ၊ နိုင်ငံတကာ၏ ထောက်ခံမှုကို ဖော်ညွှန်းသော ဒီမိုကရေစီတော်လည်း သံ ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်း ရင်းသားပြည်သူလူထုအများစု အနေဖြင့် ထောက်ခံသည်။ အကြီးအကျယ်ထောက်ခံသည်။ ပြတ် ပြတ်သားသား ထောက်ခံသည်။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရမည့်၊ လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရမည့် အလုပ်သမားမိသားစုများ၊ လယ် သမားမိသားစုများသည်ပင် သူတို့ ငတ်ပင်ငတ်၊ ကျပ်ချင်ကျပ်ငြား၊ ပြည်သူအပေါ် ကုပ်ခွစီး သွေးစုပ် ခဲ့သူများအား နိုင်ငံတကာမှ အ ရေးယူဒဏ်ခတ်သည့် သတင်းကို မင်္ဂလာသတင်းအဖြစ် သတ်မှတ် ကြသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဘား ရက်အိုဘားမား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခြေမချမီ နှစ်ရက်အလို ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် နေပြည်တော် လွှတ်တော်များမှ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားသို့ မင်္ဂလာမရှိသော သတင်းတစ်ခုပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ ဆင်းရဲမှုအပေါင်းသရဖူ ဆောင်းလျက်ရှိသော တိုင်းရင်း သားပြည်သူအများစု၏ သည်းခြေ ကြိုက်အရေးယူမှုကို မြန်မာ့လွှတ် တော်များက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်သည် အများပြည်သူအတွက် အနုတ် လက္ခဏာပြသော၊ စိုးရိမ်ရေမှတ် ကို ကျော်လွန်သော နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများစွာ၏ ဘ၀များစွာကို စတေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက် လက်နှင့် ရေးခဲ့သည်များကို အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမတ်များအပါအ၀င် လွှတ်တော်များက ခြေ ဖြင့် ဖျက်ခဲ့ပါတကားဟုလည်း မြည်တွန်တောက်တီးသံများ မြင့် မားခဲ့သည်။
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ပိတ်ဆို့မှု များပြုလုပ်ခြင်းသည် မည်သူ့ကို မျှ အကျိုးမပြုနိုင်ကြောင်းနှင့် အ မျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကာလ တွင် နောက်ကြောင်းပြန်သကဲ့သို့ ဖြစ်သဖြင့် စိတ်မပါကြောင်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သောအခါ ပြည်သူများ မျက်စိလည်သွားကြ သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေ ဖြင့် အမှန်၊ အမှား၊ အကြောင်း၊ အကျိုးတို့ကို အနုလုံ ပဋိလုံစဉ်း စားဆင်ခြင် သုံးသပ်သင့်သည်။ ဒီချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များသည် လွှတ်တော်ထဲတွင် ငြိမ် ကုပ်နေခြင်းထက် ပြည်သူ့အသံ ကို နားစွင့်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့အဆုံးအဖြတ်သည် သမိုင်း တွင် ဖြေရှင်းရဦးမည့် နောက်တိုး ပြဿနာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ )